စုချစ်သူ: April 2008
စင်ကာပူမှာ အလုပ်ရှာနေတဲ့ မောင်ညီမလေးများအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ Interview Tips လေးတွေ စဉ်းစားမိသလောက် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
၁) Tell me about yourself!
Typical မေးခွန်း ပထမဆုံးမေးတတ်တာကတော့...
Could you please tell me about yourself? ပါပဲ။
အဲဒါဟာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်တာမို့လို့ ကိုယ့်အကြောင်းပြောချင်တဲ့ key points တွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားစေလိုပါတယ်။ ကိုယ်Interview ၀င်တဲ့ Position အတွက် Attractive အဖြစ်နိုင်ဆုံး ကိုပဲရွေးပြီး ပြောသင့်ပါတယ်။ မလိုတာကို မပြောသင့်ပါဘူး။
ဥပမာ...ကိုယ်ကမတူတဲ့ Field၂ခုလောက်မှာအလုပ်လုပ်ဘူးတယ်ဆိုပါစို့။ ခုလျှောက်တဲ့ အလုပ်က ပထမအလုပ် Field နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူး၊ ဒုတိယလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်နဲ့ ပိုဆိုင်တယ်ဆိုရင်...အဲဒီပထမ အလုပ်အကြောင်းကို တိုတိုတုတ်တုတ်ပဲပြောပါ။ ဆိုင်တဲ့ အလုပ်ကဟာကိုပဲ ကိုယ်က ဘယ်လို တာဝန်တွေယူခဲ့ရတာဆိုတာ ပေါ်လွင်အောင်ပြောပြပါ။
အဲဒီမှာလဲ ကိုယ်တကယ်လုပ်ခဲ့တာကိုပဲပြောပါ။ တချို့က အထင်ကြီးအောင် မလုပ်ခဲ့ဘူးတာ၊ မလုပ်တတ်တာတွေကိုလည်း လျှောက်ပြောရင် ဟိုက အသေးစိတ်ဘယ်လိုဆိုတာလဲမေးရော မဖြေတတ်တော့ဘူး။ အဲဒီကျမှ ပိုပြီး impression down သွားလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် over sell လဲမဖြစ်ပါစေနဲ့။ မလိုလဲ မလိုစေနဲ့၊ မပိုလဲမပိုစေပါနဲ့။ ကိုယ်တတ်သလောက်၊ သိသလောက်ကိုပဲ ပြောပါ။ Fresh Grad အနေနဲ့ တခါမှ အလုပ်မလုပ်ဘူးရင်...ကိုယ်ဘာ Project တွေလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ ဘယ်လို Software တွေ၊ ဘယ်လို Tools မျိုးတွေကို သုံးတတ်တယ်၊ ပြင်တတ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို programming တွေရေးတတ်တယ် ဆိုတာကို ဂျက်ကျကျ ပြောနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
တခါက...မြန်မာကောင်မလေး တယောက် ရုံးကို Interview လာဖြေတယ်။ Interview တဲ့ အဖွဲ့မှာ စုချစ်လဲပါနေတယ်။ တကယ်က အဲဒီတုန်းကခေါ်တဲ့ positions တွေက ဘာမှ ကြိုမတတ်ထား လဲရတယ်။ Company က Training ပေးမှာကိုး။ ပြသနာက သူ့ကို တခြား ဘာမှ ခက်ခက်ခဲခဲမမေးပါဘူး။ ဘာကျောင်းတက်ခဲ့လဲ၊ ဘယ်မေဂျာလဲ၊ ဘယ်တုန်းက ကျောင်းပြီးလဲ။ ဒီလောက်ပဲမေးတာ။ ပြီးတော့ Final year မှာ ဘာ project လုပ်သလဲမေးရော..မမလေးက မေ့နေတယ်လေ...။ သူ့ဟာက project အကြောင်းလဲ သေသေချာချာမပြောနိုင်...။ ခေါင်းစဉ်တောင်မှ မေ့နေလို့ မနည်းစဉ်းစားရတဲ့ပုံ။ ကျောင်းပြီးတာမှ...၂၊ ၃လ မပြည့်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့...သူ့ attitude က မဆိုးဘူး။ အလုပ်လည်းကြိုးစားမဲ့ပုံ။ personality လေးကလဲ မဆိုးဘူး၊ စုချစ်ကတော့ မြန်မာ အချင်းချင်းလဲဖြစ်တော့ boss ကို ခန့်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ boss ကသဘောမတူပါဘူး။ စုချစ်လဲ မတတ်နိုင်ပါဘူး။
၂) Why do you want to leave your current job?
အဲ...ဒုတိယ မေးခွန်း မေးတတ်တာကတော့...နောက်အလုပ်တခုကို ထပ်လျှောက်တဲ့ သူတွေအတွက် Typical မေးခွန်းပါပဲ။
boss နဲ့ မတဲ့လို့၊
ကိုယ့် colleagues တွေနဲ့အဆင်မပြေလို့၊
စတဲ့..စတဲ့...negative ဖြစ်စေတဲ့.... အပြောမျိုး (ဟုတ်နေရင်တောင်မှ) ဘယ်တော့မှ....မပြောမိပါစေနဲ့။
များသောအားဖြင့် လူများစု ၀ိနည်းရှောင်ဖြေလေ့ရှိတာကတော့....
ခုလျှောက်တဲ့ အလုပ် Responsibility ကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလို့....
More challenges, or new challenges လိုချင်လို့....
၃) What do you think of this position and job?
အဲ...အပေါ်က မေးခွန်းလဲမေးပြီးရော..ဒီမေးခွန်းကို ဆက်မေးနိုင်ပါတယ်။
ခုခေါ်တဲ့ အလုပ်ရဲ့ Responsibility ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်...
Interview ကိုမလာခင်...ခေါ်တဲ့ Position ရဲ့ Responsibility ကဘာတွေလဲဆိုတာ သေသေချာချာပြန်ဖတ်ပါ။ အလုပ်ခေါ်တဲ့ ကြော်ငြာထဲမှာ ဒါတွေကို များသောအားဖြင့် ရေးထားလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ..ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ...မသေချာရင်... Seniors တွေကို မေးကြည့်ထားပါ။ ဒီလို position မျိုးဆိုရင် ဘာတွေလုပ်ရသလဲဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဒါမှမဟုတ် ကံကောင်းချင်လို့ ကိုယ်သွား interview မဲ့ Company မှာ အသိမြန်မာတွေရှိမယ်ဆိုရင်... အဲဒီလိုအလုပ်မျိုးက ဘာတွေလုပ်ရသလဲဆိုတာ..စနည်းနာသွားပါ။ သူတို့တုန်းက Interview မှာ ဘာတွေ မေးလေ့ရှိလဲဆိုတာတောင်မှ ကံကောင်းရင် Tips လေးတွေရနိုင်ပါတယ်။
၄) How well have you prepared for this position?/ What previous work experiences do you think that support for this position?
ဒီမေးခွန်းကို လည်း မေးတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင်...ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေ ထဲက (relevant) ဖြစ်တာ... သက်ဆိုင်တာရှိရင်..ဆွဲယူပြီးပြောပေါ့။ တကယ်လို့များ အရင်ကဒါနဲ့ သက်ဆိုင်တာ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောစရာမရှိရင်....ကိုယ့်ရဲ့ education background နဲ့ ဆွဲယူ့ပြီးပြောပါ။
Although I don’t have experience doing this kind of work before, my education is giving meaconsiderable background on this area, ......etc..
My previous job field was also new to me. But, my interest and passion for xxxxxxxx was clearly the driving factor which allowed me to excel and expand my knowledge..........
I learn how to successfully motivate work with both technical and non-technical personnel in achieving my skill in project managing and scheduling.......etc.....
ဒါမှမဟုတ်.... ခုလျှောက်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို စိတ်ဝင်စားလို့... ကိုယ့်ဘာသာ...self-study လုပ်တာတွေ ရှိပါတယ်ပေါ့..။ အဲဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်။
၅) How many hoursaweek do you need to get your work done?
အဲဒီလိုမေးတာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကအချိန်ကို ဘယ်လိုမျိုး ကောင်းကောင်း manage လုပ်နိုင်လဲဆိုတာသိချင်လို့ မေးကြတာပါ။
I always try to plan my time efficiently. Usually this works well. However, as you know unforeseen circumstances do happen and when that happens, I put in as many hours as necessary to get the job done. etc.....
၆) Tell me about the positive and the negative aspects of your last job?
ကဲ..ဒီလိုမေးရင်...ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အရင် အလုပ်ရဲ့ အကောင်း....အဆိုးကို...ဝေဖန်ပြောပြနိုင်ရပါမယ်။ ဘာတွေ အခက်အခဲ..ရှိခဲ့တယ်။ ရှိတဲ့ အခက်အခဲတွေအတွက်... ကိုယ်ဘယ်လို ကူညီ ဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်ပါ... ထည့်ပြီးပြောနိုင်ပါတယ်နော်။
၇) What skills do you offer that are most relevant to this job?
ဒါလည်း..အပေါ်ကမေးခွန်းလိုမျိုး..ခပ်ဆင်ဆင်ပေါ့။ ခုခေါ်တဲ့ အလုပ်နဲ့ relevant အဖြစ်ဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ Skills ကို...ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ အရင်အလုပ်ရဲ့ experiences ကို ဆွဲယူပြီးပြောပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ရဲ့ logical problem-solving ability တို့ analysis လုပ်နိုင်စွမ်းတို့ကိုထည့်ပြောပေါ့နော်...။
၈ ) Describe projects you have run or managed. What role did you play?
Projects တွေဘယ်နှစ်ခုလောက် manage လုပ်ဘူးလဲ။ အဲဒီ Projects တွေရဲ့ သဘောသဘာဝတွေ...ပြီးတော့ အဖွဲ့မှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်ပါသလဲ။ ကိုယ်က Leader လား။ Team member လား။ Support လုပ်ရတဲ့သူလား....စသဖြင့်ပြောပြရပါမယ်။ Team member ဒါမှမဟုတ် supporting role ဆိုလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး။
I’m comfortable in just about any other role, includingasupportive role to senior executives and the role ofapeer member ofaself-directed team. My satisfaction comes from being part ofagroup that successfully servers the client’s needs.
၉) What are your key skills? What software or tools are you familiar with?
ကဲ...ကိုယ့်ရဲ့ key skills တွေ ပြောပါ။ ကိုယ်ရေးတတ်တဲ့ programming တွေ၊ သုံးဘူးတဲ့ software တွေ၊ tools တွေလဲ ပြောပြပါ။ မသုံးဘူးတာတောင်မှ လိုအပ်ရင်self-study လုပ်ဖို့ ၀န်မလေးဘူးဆိုတာလဲ ပြောပြပါ။
၁၀) What are your strong points and weak points?
အင်း..ကိုယ်ရဲ့ strong points တွေကို ထုံးစံအတိုင်းပြောပြပေါ့။ ပြီးရင်...weak points မရှိဘူး မလုပ်နဲ့နော်...။ ဒီကမ္ဘာမှာ perfect လူသားမရှိဘူး။ ကိုယ့် Boss အနေနဲ့ မကြိုက်လောက်ဘူး ထင်တဲ့ဟာမျိုးတော့ မပြောနဲ့ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ Interview မှာ ...ငါက..အရမ်းပျင်းထူတာလို့တော့ သွားပြောလို့ မဖြစ်ဘူး။း)
၁၁) What is the plan for next5years?
နောက်ငါးနှစ်ကြာရင် ဘာဖြစ်ချင်လဲ။ ကိုယ့် Plan လေးကို ပြောပြပေါ့နော်။ Technically ပိုပြီး Strong ဖြစ်ချင်ပါတယ်တို့..ဘာတို့ပေါ့...။ အင်း...တချို့ manager တွေကြတော့လည်း manager ဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောတဲ့သူတွေကို...မကြိုက်ဘူး။
၁၂) Why should we hire you?
ကိုယ့်ရဲ့ education background နဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
Previous Experiences နဲ့လည်း ဆင်ပါတယ်။
ပြီးတော့..ကိုယ့်ရဲ့......ဘာဘာညာညာ....Strong points တွေ... Skills တွေကြောင့် ကိုယ့်ကို ခန့်သင့် ပါတယ်ပေါ့နော်။
၁၃) Are there any questions would you like to ask?
သူတို့မေးလို့ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဘာမေးစရာရှိသေးလဲလို့ မေးလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ရင် ကိုယ်မေးသင့်တာတွေ မေးရပါမယ်။
Yes, I do haveafew questions for you. 1. How is the department structured and to whom would I report in this position? 2. Could you describe for me the first project I will be working on ? 3. What other positions and/or departments will I interact with most? 4. What type of training will I receive?
ကိုယ်က အဲလိုမေးရင်...တခါတခါ..အမှတ်ရတတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့...well prepared ဖြစ်တဲ့ သူတွေသာ...ဒါတွေ သိချင်တယ်လို့ ယူဆတတ်တာကိုး။
၁၄) Say Thank you!
ကဲ..အားလုံးလဲ ပြီးစီးပြီ...။ ပြန်ဖို့ နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ ဘယ်တော့ အကြောင်းပြန်ကြားမှာလဲဆိုတာကို မေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ပြီးတော့ Thank you ပြောဖို့လဲ မမေ့ပါနဲ့ ဦး။
It isapleasure to meet-up with you. Hope to join the team soon. Thank you very much for the time.
Thank you very much for all of your time. Please try to consider me.
ဒီ Interview Tips တွေက မေးလေ့မေးထ ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကို Reference လုပ်လို့ ရအောင် ရေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့်စုံ လုံလောက်တယ်လို့ မဆိုလိုပါ။ Interview Tips တွေကို အလုပ်ရှာတဲ့ Internet web တွေထဲမှာလဲ ဖတ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။
ခုလည်းဒီမှာ နမူနာ ရှာပေးထားပါတယ်။
1) Successfully Answer Traditional Questions in Your Job Interview
2) Successfully Answer Behavioral Questions in Your Job Interview
3) Job Interview Questions and Best Answers
4) Questions You Should Ask in Your Job Interview
5) 50 COMMON INTERVIEW Q&A
6) Typical interview questions
7) Ten Tough Interview Questions and Ten Great Answers
အလုပ်ရှာနေတဲ့ မောင်နှမများအားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေ။
Posted by စုချစ် at 4/19/2008 11:02:00 PM 1 comment: Links to this post
ဟေ့ ကြားလိုက်ရဲ့လား..... ...... အာ ...... ဟာ......
နှစ်သစ်ရောက်ပြီ ...... ...... ......Yo! ......
တန်ခူးလရဲ့ နွေးထွေးမှုနဲ့အတူ ......
ခါသင်္ကြန်မိုးတွေ ရွာတော့မယ်နော် ......
စွယ်တော်ရိပ်မောင်တို့ လာခဲ့ပြီ ...... ......
မျှော်နေတာလဲကြာခဲ့ပြီ ..... တို့သိတာပေါ့
သင်္ကြန် အတွေးတွေ ရင်မှာနွေးဆဲ ......
အသဲမှာအိပ် ...... အတိတ်ပုံပြင် ......
မနှင်ရက်ရက် ...... သက်ထက်စိုးအိမ်
အချိန်မှီနိုး ..... ဟိုးအဝေးက ......
ပိတောက်ရနံ့တို့ ..... မင်းတို့ဆီကို .....ပို့မည်အရောက် ......
ပျောက်သောလမ်းတွေ ...... ရှာတွေ့ခဲ့ပြီ ......
၂၀၀၈ ခု စွယ်တော်ရိပ်ရဲ့ ......သံချပ်အဖွဲ့ ......
နားဆင်လိုက်တော့ ပရိပ်သတ်တို့ ......
Yo! ...... Yo! ...... Yo! ......
စွယ်တော်ရိပ်ရဲ့ သံချပ်ကို ကျွန်တော့် စကားလုံးများနဲ့ .....ပြောပြမယ် .....
Sydney မှာနေတဲ့ ဘ၀အတွေး ......
ကျောင်းကြွေး နဲ့ ယောက္မမကြွေး.....
အကြွေးနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ယက်ကန်ယက်ကန် နဲ့ ကူးနေရသလိုပဲ......
ဒါနဲ့ ကျွန်တော့် စိတ်တွေပျော်စေဖို့...
Bondi Beach ကိုသွားကြည့် ...
Bikini နဲ့ မိန်းကလေးတွေ တွေ့တော့ ဟီဟိ...ပီတိ...
Sydney မှာ ရင်ခုန်တာ ငြီးစီစီ ဖြစ်...
ရွှေပြည်မြန်မာကို အပန်းဖြေ ခရီးထွက်လိုက်တော့...
တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ပြောရဦးမယ်.....
ဆန်ပြုတ်နဲ့ ပဲပြုတ်ဆိုတာ..သဌေးစာ ဖြစ်လို့နေပေါ့...
ဟို အပွင့်ကြီးနဲ့ သမီးကတော့ စိန်တွေစီ...
သမုဒ္ဒရာ ၀မ်းတထွာအတွက် လှုပ်ရှားရတဲ့
Land Cruiser နဲ့ Aircon ကားတွေစီးပြီး...
ငွေကို...ရေလိုသုံးနေတဲ့ ဟိုလူကြီးတွေကို တွေ့တော့
ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ ကလိကလိ...
ဆေးရုံ ဆေးခန်းမှာ ဆေးဆိုတာလဲ မရှိမရှိ...
ပညာရှင်တွေ အားလုံးလဲ ....
ကျွန်တော့အတွက် အားကိုးစရာ တခုပဲရှိတယ်....
ပြောစရာတွေ ရင်ထဲမှာ များများ...
လှပတဲ့ အနာဂတ် အသစ်ကို..
အတူတူရောက်ဖို့..စွယ်တော်ရိပ်ရဲ့ ညီအကိုတို့က ...
(Sydney သင်္ကြန် ၂၀၀၈)
ပေးပို့သူ - ဒွန်း
Posted by စုချစ် at 4/14/2008 05:12:00 PM No comments: Links to this post
ရုံးကနှစ်စဉ်လုပ်နေကြ Strategy Meeting တွေ ဒီ Monday မှာစတယ်။ US Design Center ၄ခု က Presenters တွေရယ်၊ Singapore Branch က Presenters တွေရယ်နဲ့။ Singapore မှာ Manufacturing က သိတဲ့အတိုင်း ကောင်းတော့တာဟုတ်ဘူး။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ China တို့၊ Thailand တို့ကို ရွှေ့ကုန်ကြတာ။ Singapore က Production lines တချို့လည်း Vendor တွေကိုရောင်းလို့ Outsourcing တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ Production lines မရှိမှတော့ Process ဆိုတာလည်း ဘယ်လိုတော့မှာလဲ။
Meeting မှာ Process ဖက်က Present လုပ်တဲ့ Director တစ်ယောက်ကို သဘောကျမိတယ်။ သူ့လူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဒုက္ခမရောက်အောင်၊ လူတွေအများကြီး တပြိုင်နက်ထဲ မဖြုတ်ရအောင် Manage လုပ်ပုံလေးက လှလွန်းလို့။ သူ့လက်အောက်က Process Development ဆိုတဲ့ Section ကို သူက Process Management Section လို့ပြောင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီလူတွေက Process ကို develop လုပ်ဖို့ မလိုပေမဲ့ Vendor တွေကို Manage လုပ်ဖို့လိုတယ်လေ။ ပြီးတော့ Manage လုပ်ရမဲ့ Vendor တွေရဲ့Staff အင်အားနဲ့ သူ့ရဲ့ Staff ကိုအချိုးချပြလိုက်တာ မဖြုတ်ရတဲ့ အပြင် ထပ်ပြီးတောင် လူတွေခန့်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။ တကယ်ဆို သူ့လက်အောက်မှာ တခြား Section တွေအများကြီးရှိနေတာ။ Process ပြုတ်လို့ သူ့ရာထူးကိုဘာမှ မထိခိုက်ဘူး။ ဒီ Presentation ကြောင့် Upper Management နဲ့ တခြား Department တွေကမေးလာမဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း သူက ဖြေဖို့၊ ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပဲ။
ဒါကိုကြည့်ပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဆိုတာ ကိုယ့်လူတွေကို ဘယ်လို Protect လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိရမှာပါလားလို့ နားလည်မိတယ်။ ဘယ်သူသေသေ၊ ငတေမာရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး မရှိတဲ့ ဒီလို Director မျုိုး နဲ့ Associate လုပ်ရတာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ည ၁၀နာရီ ၄၅မိနစ်
Posted by စုချစ် at 4/08/2008 10:47:00 PM No comments: Links to this post
Sayagyi U San Tint
teachers are the greatest source of inspiration for everyone.
Besides our family, they are the ones who will walk with us throughout the good and bad times.
Friendships with teachers lastalifetime.
Whenever friends meet and talk about ...
the good old schooldays and
the wonderful times they had during their course of studies,
memories of teachers always brings
a smile on everyone's face.
Out of the many teachers that I admire,
1 stands out as my own favorite teacher.
He is Professor Dr. San Tint.
He is always there to give moral, spiritual and .....
Always willing to assist in any way he can,
he clearly defines what the role ofateacher entails.
He is likeafather-figure to all those who know him.
He always goes out of his way to help those in need.
Althoughastudent is not taught by him,
he will still try to help the student if he/she needs assistance.
There were even occasions where he managed to offer such assistance although some of us were in Singapore while he was in Myanmar.
I consider myself........
really lucky to be able to be associated with
someone of such character.
Maybe it is due to the fact that he is single
and has no children of his own,
and so decides to treat us like his own children.
To us, he is like our Godfather.
Posted by စုချစ် at 4/05/2008 09:03:00 PM 1 comment: Links to this post
ချစ်သော သီရိမြိုင် - ၁ (၁၉၈၅)
တကယ်တော့ ရပ်ကွက်လေးဟာ လမ်းတွေကကျဉ်း၊ ကျူးကျော်တဲတွေကလည်း ဟိုဖက်ဒီဖက် အနီးအနားမှာ ရှိကြလေတော့ နေစရာကောင်းလှချည်ရဲ့လို့ ဘယ်သူမှ ပြောမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီကြားထဲ မိုးရွာရင် မြောင်းတွေက ရေလျှံ၊ ဟိုဖက်အိမ်နဲ့ ဒီဖက်အိမ် ကလူတွေလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နင့်မြောင်းကို မဖောက်နဲ့၊ ငါ့မြောင်းကို ပိတ်ပြီ၊ စသဖြင့် ရန်စောင် စောင်းမြောင်းကြ။ ဗွက်တွေက လမ်းလျှောက်သွားရင် အသွားမတတ်တဲ့ သူဆို ခေါင်းထိအောင် တဘတ်ဘတ်နဲ့ တက်စင်သေး။ ဒီကြားထဲ ကိုရွှေခွေးတွေရဲ့ ချေးတုံးခွေခွေတွေက မိုးရေကြောင့် ရွှံ့ရောင်နဲ့ ဆင်တူလိုလို မသဲမကွဲ ပျံ့လူးလို့။ ခွေးချေး တက်မနင်းဘူးတဲ့သူဆို ခေတ်နောက်ကျတဲ့သူ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီရပ်ကွက်ကလူပဲမဟုတ်တော့သလိုလို။
ဒါဖြင့်နွေရာသီခြောက်သွေ့တော့ ကောင်းမှာပေါ့လို့ မမေးနဲ့။ လန့်စရာကိုရွှေမီးက လာပါပြီ။ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ညလယ် တဒေါင်ဒေါင်နဲ့ ကင်းတဲက အထိတ်တလန့် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် သံချောင်းခေါက်သံကို မကြားဘူးတဲ့ နွေညများ မရှိသလောက်ရှားခဲ့ပါ့။ အဲလိုကျပြန်တော့ ခြံတခါးတောင်ဖွင့်ချိန်မရပဲ ရပ်ကွက်ထဲက ယောက်ျားလေးတွေများ လူကြီး၊ လူငယ်၊ လူရွယ်၊ မရွေး ကလေးတွေကအစ ရေတစ်ပုံးစာ လက်ကဆွဲပြီး မီးဆိုတဲ့နေရာကို အပြေးအလွှားသွား ကူည်ီကြတာ။ မီးငြိမ်းပြီဆိုပြီးပြန်လာတော့ ခြံတခါးပိတ်ထားလို့ ပြန်မ၀င်တတ်တော့ဘူး။ ခုနက ဒီလောက်ခြံစည်းရိုး အမြင့်ကြီး သူဘယ်လို ခုန်ထွက်ခဲ့လည်းဆိုတာ သူ့ဘာသာ မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးတဲ့။ ဘယ်...မီးသတ်ကားများ အားကိုးဖို့ ခေါင်းထဲတောင်မထည့်ကြဘူး။
အလှူခံတွေဆိုတာလည်း ရပ်ကွက်ထဲမှာ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် ဒင်းကျမ်းပြည့်လို့။ အော်လံကြီးတွေကို နီးစပ်ရာခေါင်မိုးပေါ်တွေ တင်ပြီး အပြိုင်အဆိုင်ကို အလှူခံကြတာကလား။ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ အဲဒီကဖွင့်လေ့ရှိတဲ့ ကြာနီကန်ဆရာတော် တရားများ ၅နှစ်သားလေးကအစ အကုန်အလွတ်ရတယ်။ မတည့်တဲ့သူ အချင်းချင်းတိုက်ပေးပြီး အလှူငွေကောက်လို့ကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ စာမေးပွဲတွေကဖြေရတော့မယ်။ ရပ်ကွက်ထဲက မင်္ဂလာဆောင် ဆောင်းဘောက်စ် သီချင်းသံတွေကြောင့် စာမေးပွဲနဲ့များတိုက်ဆိုင်လို့ကတော့ စာကျက်မရတော့ပဲ ဘောလုံးကွင်းထဲ စာသွားကျက်ခဲ့ဘူးတာလည်းရှိပါ့။ ဘယ်စာကျက်လို့ရမတဲ့လဲ။ သီချင်းတွေ လိုက်နားထောင်ပြီး ပုဇွန်ဆိတ်လေးဘယ်လိုငယ် ပင်လယ်ကူးတတ်တယ်...လို့ လိုက်လုပ်နေတာကိုး။
ညနေချမ်းများမှာဆိုရင်တော့ တအိမ်အိမ်က လင်မယားတွေ ရန်ဖြစ်သံ (ဒါမှမဟုတ်) မကျေနပ်တဲ့သူတွေကို စောင်းပြီး သူ့ကလေးတွေကိုငေါက်လေ့ရှိတတ်တဲ့ ဒေါ်လုံးရဲ့စွာကျယ်ကျယ်အသံ၊ အရက်မူးပြီး သီချင်းတွေအော်ဆိုလာတဲ့ ကိုတာတီးရဲ့ရီဝေေ၀အသံ စတာတွေက ရံဖန်ရံခါ ကြားရတတ်တဲ့ မရိုးနိုင်သော ရပ်ကွက်လေးရဲ့ သံစဉ်လေးတွေပေါ့။ တခါများ ညနေခင်း လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း ကျူးကျော်တဲတွေဖက် အရောက် မိန်းမကြီး၂ယောက်ရန်ဖြစ်ပြီးဖက်လုံးကြတာ ထမီတွေကျွတ်ကုန်တဲ့ထိ။ ကျွတ်သွားတဲ့ ထမီကို ဂရုမစိုက် ခြေထောက်လေးနဲ့တောင်ခတ်ထုတ်လိုက်ပြီး အနိုင်မခံအရှုံးမပေးလုံးနေကြတာများ ကမ္ဘာ့နပန်းသတ်ပွဲက ဒိုင်လူကြီးတွေများမြင်ရင် စောစောက မသိရလေခြင်း၊ သူတို့ရုံသွင်းမပြလိုက်ရလေခြင်းလို့ ရင်ထုမနာဖြစ်ကြလေမလားသိဘူး။
မိုးမလင်းခင် အိမ်ပေါ်တက် ပိုက်ဆံချေးတတ်တဲ့သူတွေကိုလည်း ကြုံရတာ ရှိသေးပ။ မပေးလိုက်ရင်များ မဲ့တာရွဲ့ကာနဲ့ ချေးဖတ်ကြီးတင်သွားတာပဲ ရှိပါတယ်အေလို့ နောက်ကွယ်မှာ အတင်းကတုတ်ဦးမယ်ဆိုတာ သိသား။ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အမျိုးအလှူ မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာတော့ တစ်ယောက်ဆီက တစ်ယောက် လက်ဝတ်လက်စားတွေ ဋ္ဌားဝတ်လို့။ အဲဒီအခါကျပြန်တော့လည်း အပေးအယူတွေတည့်နေကြပြန်ရော။ မင်္ဂလာဆောင်၊ အသုဘ မစည်မှာ မပူနဲ့။ သိသိ မသိသိ ၀ိုင်းကူမဲ့သူရယ်၊ ၀ိုင်းစားမဲ့ သူရယ် အစဉ်သဖြင့် အဆင်သင့်ပေါ့။
ရပ်ကွက်ထဲက အပင်တွေ၊ အသီးတွေများ အပျော်ခိုးခူးချင်တဲ့သူတွေက ပေါလွန်လွန်းလို့။ တချို့များ အဲဒီအပျော် သူခိုးရန်ကြောက်လို့ အသီးမမှည့်ခင် ကြိုခူးထားကြရတယ်။ အိမ်ထောင့်က မာလကာပင်ဆို ကာလသားတွေက မိုးရွာထဲ ဘောလုံးကန်သလိုလို ခပ်တည်တည် တန်ချူနဲ့ တောင်ခူးလိုက်ကြသေး။ ခူးလိုက်လို့ အသီးက အိမ်ထဲကျသွားရင်လည်း ဒေါ်ကြီး ဘောလုံးကျလို့ ၀င်ကောက်မယ်နော်ဆိုပြီး ဘောလုံးကို တမင်ပစ်သွင်း၊ မာလကာသီးပါမက ပွင့်နေတဲ့ ပန်းလေးပါ ကြုံတုန်း ဖြတ်ဆိုခူးပြီး သူတို့ပိုးနေသူတွေအတွက် သူခိုးသူဝှက် မတော်တဆလုပ်လိုက်ကြသေးတယ်။
တန်ဆောင်မုန်းလများ ရောက်လို့ကတော့ ပျော်ပွဲကြီးပေါ့။ စတိတ်ရှိုးစင်တွေပေါ်က တေးသရုပ်ဖော် အဆိုတော်တွေများ နာမည်ကြီး မင်းသားအရှုံးပေးရလောက်အောင်ကို မီးရောင်တန်ခိုးနဲ့သားနားနေကြလို့။ ကျော်ရဲအောင် ဆိုတာ ဒီလိုစင်မျိုးကပဲ ထွက်သွားတဲ့သူဆိုလား။ လပြည့်နေ့ည ကျီးမနိုးပွဲမှာတော့ ရပ်ကွက်ထဲက အုန်းသီး အပင်နိမ့်တာတွေဆို အကုန်ကုန်။ သစ်ခွပန်းလှလှလေးတွေများကြတော့ သူတို့က ခူးပြီး အပျိုတွေအိမ်ရှေ့ထားလိုထားပေးနဲ့။ ပန်းပျောက်သွားတဲ့ ပိုင်ရှင်က တဗြစ်တောက်တောက်နဲ့ မိုးမလင်းတလင်း လပြည့်နေ့ ဥပုသ် ထွက်ကာစကို မေ့လျှော့ပြီး ဆဲရေးတိုင်းထွာမိလို့။ အိမ်ရှေ့မြောင်းကတံတားအကြီးကြီးက သေးသေးလေးဖြစ်လိုဖြစ်။ သေးသေးလေးက အကြီးကြီးဖြစ်လိုဖြစ်ပေါ့။ အပျိုကြီးအိမ်ရှေ့ လင်အလိုရှိသည် ဆိုင်းဘုတ်ဆွဲလိုဆွဲကြနဲ့။ မိုးလင်းလို့ အသီးသီး အသကအသက မည်တွန်တောက်တီးသံတွေကို သူတို့က သာယာနာပျော်ဖွယ် သီချင်းသံလေးတွေ နားသောတ ဆင်နေရတဲ့သူတွေလို ပြုံးပျော်လို့။
အော်... ဒါလေးတွေကပဲ ခုလို ဝေးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်စဉ်းစားမိရင် လွမ်းစရာကောင်း၊ အလွန်ကို ချစ်စရာကောင်း နေပါရော့လား။
Posted by စုချစ် at 4/01/2008 12:00:00 AM No comments: Links to this post
Labels: Essay, Fun, Myanmar